I-Beetroot Recipe ne-Chicken Knels
I-beetroot ye-Beetroot ephekwe ngokubhekiselele kule recipe inomdla okhethekileyo, obangela ukulandelelana kwamanyathelo athile. Ikratshi eyingqayizivele inika ubukho beentsimbi kwi inkukhu encinci. Ewe, kuya kufuneka sicinge, senze isigqibo sokupheka, kodwa ndikuqinisekisa: ungazisoli! Amaqonga ama-meatballs, afunyanwa yiFrentshi, azilungiselele ukusuka kwizinto ezihlukeneyo zokungahambelani kakuhle, usebenzisa iipuni ezimbini.
Iibhatateshi 200 g
IiKaroti 100 g
I-Celery ifaka 100g
I-anyanisi 100 g
Inkukhu encinci 500 g
Ioli ye-sunflower ecocekileyo i-sunillar 50 ml
I-tomato sauce 50 g
Uhlaza anyanisi 0.5 ibhola
Inyathelo 1 Ukulungiselela i-beetroot kufuneka uthathe i-beetroot, iitatayi, i-anyanisi, i-stalk stalks, i-tomato sauce, ioli ye-sunflower, inkukhu ye-inkuku, isitashi, iqanda.
Inyathelo 2 Kwinkukhu ye-inkukhu songeza i-spoonful ye-starch isitashi, iqanda, ityuwa. Eyona nto sidibanisa, ukuba i-forcemeat ijika kakhulu, songeza amanzi.
Inyathelo 3 Hlanganisa kwaye uhlambulule imifuno.
Isinyathelo 4 Thele i-2-2.5 ilitha yamanzi epanini, masiwunciphise ngokupheleleyo kwi-beet, sinqunywe kwisiqingatha sesigqabi sesoti, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, u-anyanisi unqunywe kwiinqununu ezinkulu. Yizisa kwi-thumba, upheke phezu kobushushu obuphantsi imizuzu engama-30.
Inyathelo lesi-5 Okwangoku, silungiselela ukugqoka: gubungela iinqathe i-grater, nqumle i-anyanisi kunye ne-celery.
Inyathelo 6 Ukufudumala ipenki yokutya kunye nebhotela, kongeza izaqathe, anyanisi, iziqu ze-celery.
Inyathelo lesi-7 Sivumela imifuno elungiselelwe ngokukongezwa kweepuni ezimbini zomhluzi ovela kwi-pan.
Isinyathelo 8 Ukususela emhlanjeni kuthathe imifuno, iibhotile zivunyelwe ukupholisa, ezinye ziyakususwa.
Isinyathelo 9 Sika iizambane zibe ngamacube.
Inyathelo 10 Beka iifatata kumhluzi wemifuno. Yizisa kwimathumba, upheke imizuzu eyi-10.
Inyathelo 11 Sisebenza isobho kunye nemifuno.
Isinyathelo 12 Khanda i-beetroot i-rubetro enqabileyo.
Inyathelo 13 Sivunyelwe kwi-pan yokupaka kunye nokudibanisa ibhotela kunye ne-tomato sauce.
Inyathelo 14 Senza amaqhina ngokusebenzisa iipuni ezimbini: siqokelela inyama enotyiweyo kwisipuni, sesibini ixinzezelwe, ijikeleze i-axis ephakathi,
Inyathelo 15 Hlanganisa i-forcemeat kunye nenyama egayiweyo uze uyidibe kwisobho. Emva kokuba wenze ama-knels kuzo zonke iindawo, uvuse ngobumnene upheke isobho ngokuguqa 10-15 imizuzu ngokupheka. AmaNobels alungiselela ngokukhawuleza, ngelixa aqhubela phezulu.
Inyathelo le-16 Kwi-beetroot-tomato yokugqoka, yongeza i-garlic echanekileyo, xuba.
Inyathelo 17 Hlanganisa ukugqoka kwisobho, ukuzisa kwi-thumba, vala isitya kwaye vumela i-beetroot imise phantsi kwesiqhekeza imizuzu emi-5-10.
Inyathelo 18 Unokongeza nayiphi imifino kwisobho esilungisiweyo. Khonza isobho nge-ukhilimu omuncu. Ukubhenca i-beetroot, i-taste ye-garlic, i-sweet taste edibeneyo, ama-knice ama-juicy akayi kumshiya nabani na? Qiniseka ukuzama!
Isaladi kunye nelayisi kunye ne-shrimps
Kunokuba kunokwenzeka ukutshintsha iParmesan
I-Tango ngumdaniso wothando kunye nothando
Indlela yovuyisana nabo ngoFebruwari 23: imibongo, nincoma, nantoni na ukunikela
Ividiyo yokuqala yonyana kaXenia Sobchak kunye noMaxim Vitorgan: Esi sibini saphinda sakhohlisa ipaparazzi
Iimpawu zesistim se-cardiovascular system
Ukutya kweembotyi, imbombo kunye neetatayi